Mogadishu Journal » 2018 » July » 23
//July 23, 2018
Xukuumadda oo digniin u dirtay Hay’adaha ka shaqeeya wacyi gelinta gudniinka fircooniga
Mjournal :-C/laahi Xaashi Cali, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay Wasaaradda in siyaasad iyo nidaam ahaan ay dadaal ugu jirto sidii loo joojin lahaa gudniinka fircooniga ah. Wuxuu sheegay inay jiraan shaqsiyaad sheegta...
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarkii Baar-Sanguuni
Mjournal :-Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa dowlad Goboleedka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa howlgal ballaaran haatan ka wada degaanka Baarsanguuni iyo nawaaxigiisa oo Saaka ay Weerar culus ku qaadeen dagaalyahanada Al-Shabaab sidda lagu sheegay war kasoo baxay dowladda Soomaaliya....
Mesut Ozil: Waxaa Isoo Gaaray Warqado Naceyb & Hanjabaado ah
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Mesut Ozil ayaa ka fariistay kubada cagta caalamiga ah, isagoo yiri “cunsurinimo iyo ixtiraam la’aan darteed ayaan kaga tagay xulka Germany. 29 jirkaan ayaa la eedeeyay ka dib markii lagu sawiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan...
Weerar lagu dilay ku dhawaad 10 qof oo ka dhacay dalka Canada
Mjournal :-Ciidamada Booliska ee Magaalada Toronto ayaa xaqiijiyay in la dilay 9 qof oo rayid ah kadib weerar toogasha toosa ahaa oo ka dhacay Magaaladaasi. Weerarkan ayaa ila hadda waxaana laga heeynin Faah faahin dheeriya War Kooban oo lagu soo qoray Barta Twitter-ka ay ku...
ICC CUP: Juventus oo magacawday Xidigaha ay ku wajihi doonto Kooxaha Bayern Munich, Real Madrid iyo Benfica
Juventus tababaraheeda Massimiliano Allegri ayaa magacaabay 27 ciyaaryahan, iyada oo ay Juventus waqtigeeda fasaxa ku qaadanayso Maraykanka halkaas oo ay uga qayb galayso 2018 International Champions Cup. Bianconeri ayaana koobka ku wajihi doonta kooxo waawayn oo ay kamid yihiin,...
Jubbaland : Saraakiil Al-shabaab ah ayeeynu ku dinay weerarkii saakay
Mjournal :-Ciidamada Daraawiishta Jubbaland ayaa hawlgal gaar ah ku burburiyay fariisin Ururka Al Shabaab ay ku lahaayeen meel ka mid ah degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale waxa ay ciidanka Jubbaland la wareegeen sahnad ciidan oo Shabaab ay lahaayeen, sida ay...
Ilaa Lix qof oo ku qariqmay xeebaha Badda Puntland
Mjournal :-Ilaa Lix qof ayaa shalay ku qariqmay xeebaha Badda Puntland, kuwaasi oo Hal Doon wada saarnaa, sida ay inoo sheegeen masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Kalluumeysiga Puntland. Dadaalo badan oo la sameeyay kadib waxaa lagu guuleystay in la soo helo meydka Hal ruux oo...
Fighters of the al Shabaab group attacked a military base with a suicide car bomb in the south of Somalia, killing 27 soldiers, the group said on Monday, a blast heard by residents of a nearby town. The attack follows a June attack on the base by al Shabaab that wounded seven...
Al-shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidan gobolka Jubbada hoose
Mjournal : -Xoogag hubeysan oo ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa saakay waabarigii waxa ay weerar saf balaaran ah ku qaadeen degaanka Baar-sanguuni oo ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo, halkaasi oo bar ciidan ay ku leeyihiin ciidan isku jir ah oo dowladda federaalka iyo...